Ebumnuche 10 kpatara na obere azụmaahịa enweghị ike ileghara mmekọrịta mmadụ na ibe ya anya Martech Zone
Tuesday, January 28, 2014 Mọnde, Jenụwarị 27, 2014 Douglas Karr
Jason Squires etinyela ndepụta nke echebara echiche Ebumnuche 10 kpatara na obere azụmaahịa enweghị ike ileghara Social Media anya. Ọ na-enye ihe akaebe niile obere azụmaahịa ọ bụla chọrọ ma ọ bụrụ na ha ka na-achọ ịmata ma ha ga-adanye. M ga-eme ka ihe ndị a niile belata ruo ihe abụọ akọwapụtara nke ọma, ọ bụ ezie:
Ndị ọrụ ibe gị, atụmanya na ndị ahịa dị ugbu a. You nọ ya mgbe ha chọrọ enyemaka? You nọ ebe ahụ na-adụ ha ọdụ maka ire ere ọzọ ha?
Gị mpi nwere ike ọ gaghị adị! Ọtụtụ ndị na-eji nke a dị ka ihe ngọpụ… onweghi onye na ulo oru anyi no na soshal midia. Chaị… kedụ ohere dị egwu ị ga-eji akụ ọkọlọtọ gị n’ala! Kedu ihe ị na-eche? Asọmpi gị ibido?
Ngosipụta, mmata, iguzosi ike n'ihe… ndị a niile bụ ihe na-akpata iji merie nsogbu ntụkwasị obi. Idebe ụdị mmadụ gị na ndị gị n’ihu ụlọ ọrụ gị kama zoo n’azụ akara gị na-eme ka ị ghara inwe nsogbu. Nke ahụ dị ka ọ dị njọ, mana ọ bụghị. Ndị mmadụ chọrọ iso ndị mmadụ rụọ ọrụ - ọ bụghị akara ngosi!
Video: Art nke Data Anya
Maria Witwiky kwuru
hey! nwetara ezigbo echiche site na blọgụ gị cz m na-agba obere azụmaahịa ma na-eche ịkwalite na ịntanetị. Ugbu a, m ga-eji enyemaka nke post gị mee. 🙂
Feb 1, 2014 n’elekere 3:34 nke abali
Anyị agbasoro Iwu Social Media niile maka obere azụmaahịa anyị na Ọ D NOGH has ihe arụ ọrụ dịka Social Media Gurus buru n'amụma - Nke a bụ hype niile na NOT100% nkwa nke ịga nke ọma. Anyị enweghị ndu, enweghi ụgwọ ọrụ na ihe ọ bụla anyị nwara mere ka azụmahịa ahụ gaa n'ihu. Mana anyị ji nnukwu ego azụmaahịa. Biko biko agwala anyị na anyị mere ya niile ezighi ezi n'ihi na anyị emeghị - Facebook, Twitter, Pinterest, Blog na weebụsaịtị… Anyị bụ ndị ọkachamara na ahịa ma gbalịa Gurus niile; Ndụmọdụ hy Ya niile mama.
Feb 2, 2014 na 6:09 PM
@anthonysmithchaigneau: disqus results gị abụghị ihe ọhụrụ na agaghị m asị "ị mere ya na-ezighi ezi". Ọ bụrụ n’ịga n’ihu na-agụ blọọgụ anyị, ị ga-ahụ ebe anyị siri laghachi ‘gurus’ ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ịgbado anya nke nwere ọtụtụ ọwa karịa naanị mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Industriesfọdụ ụlọ ọrụ na-anọghị ebe ahụ, ụfọdụ obodo anaghị adị, ma oge ụfọdụ ọ nweghị ọdịbendị kwesịrị ekwesị maka azụmaahịa ahụ. Echere m na ọ na-atọ ọchị mgbe niile ka ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta na-enweta nnukwu nsonaazụ… ọ dị ka ọka iwu na-agbachitere ndị ọka iwu 🙂 N'ezie 'gurus' na-enweta nnukwu nsonaazụ na ya… nke ahụ bụ ihe ha na-eme maka ndụ. Ọ bụghị ụlọ ọrụ niile ka ha bụ otu.
Ekwenyere m na ọ bụ ya mere, na ntuli aka ahịa 2013, ndị na-ere ahịa tụgharịrị uche ha gaa ahịa email dị ka atụmatụ bụ isi. Anyị nwere mmasị na mgbasa ozi mmekọrịta iji 'nkwughachi' na nkwalite nke ọdịnaya anyị - mana anyị ka na-adabere na ọwa ndị ọzọ dị ka ọchụchọ, email, mgbasa ozi na ọbụnadị mgbalị. Daalụ maka isonyere mkparịta ụka ahụ!
Nzaghachi dị jụụ sitere na Douglas nye Anthony.
Ọkt 14, 2016 na 6:19 PM
Fọdụ ezigbo ezigbo ihe mere ị ga-eji gaa na mgbasa ozi mmekọrịta! Ọ na-esiri m ike ịchọta ọdịnaya m biputere ruo mgbe enyi m gwara m ka m jiri Capzool, ha nwere akwụkwọ ederede maka ụlọ ọrụ niche m, ma ga-emekwu ihe mgbe m rịọrọ ya. Enwekwara kalenda nkwanye na-enye m ọkwa maka ụbọchị ọ bụla n'afọ. Ekwadoro m ka onye obula jiri ya!